सङघर्षको पथ ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सङघर्षको पथ !
शनिबार, जेष्ठ १८, २०७६
- दिपक दाहाल
म पसिनाको लामो सुर्की चिया पिएर आज हिउँमा आगो बाल्न सङघर्षको उडान भरिरहेछु । चाहे पानीमा बस्ने जीव वा आकाशमा उड्ने जीव या हरेक सजिव निर्जीवको लागी संघर्ष । जन्म लिन र दिनको लागि संघर्ष । ताते ताते भन्दै दुई खुट्टा टेक्नको लागि संघर्ष ।सफल व्यक्तिहरुलाइ सफलता कायम राख्दै बढाउनको लागि संघर्ष । शेर जिवित रहनको लागि दिनैपिच्छे सिकारको गर्धन निमोको लागि सङघर्ष । त्यही दोस्रो सिकार सिकारीबाट प्राण बचाउनको लागि सङघर्ष । एकको संघर्ष भोजनको लागि अर्काको सङघर्ष जीवन बचाउनको लागि । मेरा ती विगत जुन दिनहरूमा तप् तपी सिँगान चुहाउदै टालेको कट्टु लगाएर हिड्दा हिलोमा दुई बल्ड्याङ बजारिदाको संघर्ष ।
आज पनि म त्यही पथमा सङघर्ष गर्दैछु । फरक यतिमात्र हो कि सिँगान चुहुन छाड्यो अनि कट्नु ठुलो लाग्यो । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई हेर्ने आजको समाजमा म सेन्टिमिटरको स्केल लिएर सगरमाथाको उचाई नाप्न हिडिरहेछु जस्तो लाग्छ । आज म निलो कार्पेट बिछ्याइएको ठुलो आकाश देखिरहेछु । हटिया भर्न आएका नौ लाखौं ताराहरुले इन्द्रेणीको रङ्ग भर्न खोजिरहेछन् । कति स्वार्थी छन् ती ताराहरु । आज हामी भित्रको म हैन, म भित्र हामी खोज्दै त्यो गगन, बादल, पाहाड, हावासँग कुस्ती मारिरहेछन् । आज म दुई सय केजीको फलामको लामो सिक्रीले बाँधिए पनी हरेक मिलिसेकेन्ड घिस्रदै छु । एउटा मात्र आसमा कि मिलिमिटरबाट सेन्टिमिटर, मिटर अनि किलोमीटरसम्म पुगुला की ?
जब मान्छेलेले जन्म लिन्छ ऊ सँग श्वास त हुन्छ तर पहिचान हुँदैन । जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ । पहिचान हुन्छ तर श्वास हुँदैन । यहि श्वास र पहिचानको संगमको गतिमा हिडिरहेको म यात्री हुँ । जस्तो की खुल्ला आकाशमा उडान भर्न अनुकुल समय पर्खिरहेछु । गाउँको कुनामा बसेर दुनामा खाइरहेको बटुवा जब शहर नाउँको ठुलो थुनामा पर्छ नि । बिचरा ! अनि त्यस्को मनबाट निस्कछन् ठुला ठुला धुनका रंगिन बाजाहरु । सहयोग गर्नुको सट्टा गाजा खाएको होसमा बजेका ती बाजामा नागीन डान्स हान्दैछन् आजका बोक्रे भलादमिहरु । चट्टानको मसिनो कापबाट चुहिरहने पानीको थोपाजस्ता निकै मसिना सपनाहरू नदिको प्रवाह देख्दा तर्सिन सक्छन्, सायद यो प्रकृति हो । हो, आज म त्यही पानीको थोपा हुँ, समुन्द्र भेट्न विगत देखि वर्तमान अनि भविष्य सम्म पहिचान खोज्दै लम्किरहे’छु ।
ए साथि ….
ए साथि .... ए साथि तिमि बेरोजगार रहेछौ म त झनै व...
मौन, मात्र मौन, बिलकुल मौन
मौन, मात्र मौन, बिलकुल मौन एउटा राष्ट्र थियो,...